Gadziriro yemwaka neSeed Co | Kwayedza
Gadziriro yemwaka neSeed Co
18 Sep, 2020 - 00:09	 2020-09-17T16:10:52+00:00 2020-09-18T00:05:58+00:00 0 Views
TINOKUKWAZISAI varimi kumatiwi ose enyika pachirongwa chatinodzidzisana zvekurima navasahwira venyu veSeed Co.
Vakuru vakareva pavakati rwendo rwemujecha hutangirana pamwe nevamwe. Izvozvi murimi akarongeka anofanirwa kuve ari mubishi kutenga mbeu sezviri kuita vamwe.
Kutaura kuno varimi ibararamhanya vachinotenga mbeu dzavo dzinobva kunyanzvi pakuuchika mbeu kuSeed Co. Isu veSeed Co tinoti zvinotanga nembeu kwayo kuti murimi awane pundutso kubva mukurima naizvozvo mbeu kwayo inongowanikwa chete kuSeed Co.
Yangova wasara wasara, riri bararamhanya varimi vachinotenga mbeu dzavo dzavanofarira uye dzinovapa goho repamusoro-soro.
Shiri yakangwara inovaka dendere rayo nguva iripo, uye akubaira zanhi ndewako.
Kurima kune pundutso kunotangira pambeu kwayo naizvozvo mbeu kwayo inowanikwa kubva kunyanzvi pakuuchika mbeu iri kambani yeSeed Co.
Kuti munzwe zvakawanda batai mudhumeni wenyu weSeed Co Ronnie Chigombe pa0772240846
Kurima munda zvakanaka22 Oct, 2020